Fadlan Tijaabi Foomamka Jiilkaaga Hogaamiya | Martech Zone
Fadlan Tijaabi Foomamka Jiilkaaga Lead
Jimco, Nofeembar 20, 2015 Khamiista, Febraayo 25, 2021 Douglas Karr
Dhowr sano waxaan la shaqeynay macmiil maalgashi miisaaniyadeed muhiim ah la leh hay'ad sumadeyn si loo dhiso dhisme websaydh cusub oo qurux badan. Macaamiilku wuu noo yimid sababtoo ah ma arkin wax hagayaal ah oo soo socda oo ka socda goobta wuxuuna naga codsaday inaan ka caawinno iyaga. Waxaan sameynay waxa ugu horeeya ee aan caadiyan qabano, codsi ayaan ku gudbinay bogga xiriirkooda waxaanan sugnay jawaab. Midkoodna ma imaan.
Kadib waan la xiriirnay iyaga oo weydiinay halka ay ku baxday foomka xiriirka. Cidna ma ogeyn.
Waxaan marin u helnay goobta si aan u aragno nafteena halka foomamka la soo gudbiyay oo aan ka naxnay inaan ogaanno inaysan dhab ahaantii meelna geyn. Bogga xidhiidhka ee quruxda badan (iyo bogagga kale ee soo degaya) waxay ahaayeen foomam cufan oo ka soo jawaabaya shabakadda iyada oo la xaqiijinayo laakiin umay dirin kumana keydin soo gudbinta meel kasta. Yikes.
Sannadkan, waxaan la wareegnay macmiil cayriyay wakaaladoodii suuqgeynta ee hore isla arrinta. Waxay ku noolaadeen nolol mana helin hogaamin muddo saddex bilood ah. SADDEX BILOOD. Haddii ujeeddada suuqgeyntaadu tahay inaad ku kasbato hoggaamiyeyaal ama ku iibiso khadka tooska ah, sidee adduunka ugu socotaa saddex bilood adigoon ogeyn in wax hoggaan ahi aysan soo soconin. Haddii aysan na siinin marin u siinta warbixinta, waxaan weydiinaynaa kulan kasta oo dhaca sida jiilka hoggaamintu u socdaan.
Haddii aadan ka jawaabin waqtiga codsiyadaada webka, halkan waxaa ku yaal dhiirigelin:
Waxaad haysataa 100 jeer fursad aad kula xiriirto hoggaanka haddii aad ku jawaabto 5 daqiiqo gudahood oo ka soo horjeedda 30 daqiiqo ka dib soo gudbinta.
Waxaad haysataa 21 jeer fursad aad ugu qalanto hogaanka haddii aad ku jawaabto 5 daqiiqo gudahood oo ka soo horjeedda 30 daqiiqo ka dib soo gudbinta.
Waxaan badanaaba tijaabineynaa macaamiisheenna iyadoo la adeegsanayo magac kale iyo cinwaan emayl, iyadoo codsi loo gudbinayo degelkooda si loo arko muddada ay jawaabtu qaadatay. Inta badan maahan, waa 1 ama 2 maalmood. Laakiin dib u eeg xisaabaadkaas InsideSales.com kor… haddii aadan jawaabin oo uu kula tartamo, yaad u malaynaysaa inuu meheradda helay?
Waxaan la shaqeyneynaa macaamil ganacsi e-commerce ah oo aan codsi ku sameynay goobta. Dhowr saacadood gudahood ayaan jawaab ka helnay su'aashayada ku saabsan wax soo saarkooda. Waxay ku jawaabeen hal jumlad, shaqsi ahaaneed, mahadnaq la'aan, iyo - ugu xumaa dhammaan - ma lahan xiriirin macluumaad dheeri ah ama bogga sheyga dhabta ah ee soo booqdehu raaci karo oo wax ku iibsan karo.
Haddii aad codsi ka helayso emayl ama foomka websaydhka ee shirkaddaada, miyaad raadineysaa bal inaad fiiriso haddii qofku macaamil muddo dheer ahaa ama rajo cusub? Miyaad si qoto dheer wax uga bari kartaa arrinta taagan? Ma kula talin kartaa iyaga waxyaabaha ku saabsan waxyaabaha dheeraadka ah si aad u hubiso? Ama - xitaa ka sii fiican - si uun ayaad toos ugu keeni kartaa wareegga iibka? Haddii ay ka tageen lambar taleefan, maxaad u wici weyday oo aad u eegi kartaa haddii aad iib ku xiri karto telefoonka? Ama hadday tahay emayl, miyaad siin kartaa qiimo dhimis ku saabsan badeecad ama adeeg ay xiisayn karaan?
Kuwani maahan hoggaanno qabow, waa hoggaanno kulul oo casaan ah oo waqti ku bixiya soo gudbinta macluumaadkooda shakhsi ahaaneed oo ku weydiista caawimaad. Waa inaad ku booddaa fursadahaan si aad u caawiso oo aad naftaada u guuleysatid!
Tijaabinta otomaatiga ah
Mid ka mid ah xalalka tijaabinta otomaatiga ee foomka si ballaaran loo isticmaalo ayaa jira sayliniyam. Tiknoolajiyadooda, waad awoodi kartaa qor foomka soo gudbinta bogga. Tani waa wax aad ubaahan karto inaad waqti iyo dadaal geliso, qaasatan hadaad si joogto ah usameyso goobta iyo tiknoolajiyada. In lagaa feejignaado markay jawaab ka bixinayso bogga xiriirka ama soo gudbinta foomka hoggaanka 5 daqiiqo gudahood waxay noqon kartaa istiraatiijiyad aad rabto inaad dirto sida ugu dhakhsaha badan!
Tags: foomamkasoo gelitaanka gudahamarketing inboundjiilka ledqaababka jiilkatayada jawaabtawaqtiga jawaab celintafoomamka onlaynka ah
Xalalka Shakhsiyadeed ee Ecommerce waxay u Baahan Yihiin 4 Istaraatijiyadood
Cabbiraadda Hawlgelinta Macaamiisha Waqti-Dheer iyadoo loo marayo Falanqaynta Habdhaqanka Codka